Apple TV ine tvOS 11 uye yako AirPods inowirirana zvirinani uye zvirinani | Ndinobva mac
Apple TV ine tvOS 11 uye yako AirPod inowirirana zvirinani uye zvirinani
Isu takanga tatozvitaura muzvinyorwa zvakapfuura, chizvarwa chechina Apple TV uye iyo nyowani Apple TV 4K ichave iine maficha nyowani neakakosha tvOS 11. Iyo nyowani yekushandisa sisitimu inoita kuti kubata kweApple TV kuve nyore zvakanyanya kusvika pane zvimwe zviito zvine chekuita.
Nhasi zvatiri kuda kukuudza ndiyo nzira yekudyidzana neako Apple TV uye yako AirPods, kana iwe uine zvese zvishandiso.
Iyo itsva tvOS 11 inosvika yakatakurwa nenhau, asi imwe yadzo iri kuzoshandiswa zvakanyanya uye ndizvo zviri mune ino yazvino vhezheni yeApple TV system isu tine nzira pfupi yekubatanidza maAirPod neApple TV yedu. Tisati tatsanangura maitirwo azvo, isu zvakare tinofanirwa kuratidza kuti izvozvi maAirPods zvakare akawiriraniswa neApple TV kuburikidza neICloud gore, saka zvese zvichave nyore.
Kusvika parizvino, kuti tikwanise kushandisa AirPods, kunyangwe pachizvarwa chechina Apple TV taifanira kuenda kumablue bluetooth uye kusarudza AirPods kuti kubatana kwavo kuitike. Zvakanaka, neTVOS 11 zvinhu zvinoshanduka uye ikozvino isu tinokwanisa kuchinjika pakati pekuburitsa odhiyo kuburikidza nevatauri veTV kana maAirPod tichiri general screen uye wakabata pasi PLAY bhatani pane Siri Remote kwemasekondi mashoma.
Izvo zvinobva zvango taratidza isu pop-up menyu umo matinogona kusarudza iyo AirPods iyo yakawiriraniswa neICloud, saka tinofanirwa kutanga tabvisa mahedhifoni mune yavo ndokuaisa munzeve dzedu.
Kupedzisa chinyorwa ichi, tinodawo kuti iwe uzive kuti, pakupedzisira, iyo nyowani Apple TV 4K ine bluetooth 5.0, nekudaro uchikwanisa kuita kubatana kwe kupfuura maAirPod mashoma kune imwecheteyo kifaa, ichibvumira vanopfuura munhu mumwe kunakidzwa nezviri mukati pasina kuvhiringidza mapato echitatu nezwi. Iyi sarudzo yatisati taedza asi yatinoziva kuti inowanikwa. Kana isu tine mukana wekuyedza paApple TV 4K, hatizononoka kutaurira vaverengi vedu nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple TV ine tvOS 11 uye yako AirPod inowirirana zvirinani uye zvirinani
Idzi ndidzo nhau dzeManotsi mu macOS High Sierra
Wedzera haptic mhinduro kuTouch Bar pane yako MacBook Pro neapp iyi